Araka ny dingana dia nandeha fitsipahana didy na “cassation” ny dosie izao, hoy izy, ho anay rehetra tsy afa-po tamin’ny didim-pitsarana. Ny kabinetran’ny Maitre Willy Razafinjatovo dia isan’ny nanao izay “pourvois en cassation” izay satria miaro an-dramatoa Voahangy sy andriamatoa Paul Rafanoharana. Tsy mangina ny dosie fa misy dingana maro mbola tsy maintsy arahana any amin’ny fitsarana an-tampony. Isany ny fanaovan’ny mpitsara ao amin’ny fitsarana an-tampony tatitra, izany hoe, mbola tsy maintsy mametraka karazana fehin-teny koa ny mpitsara ao dia rehefa tapitra izay rehetra izay vao mandeha ny fihainoana na “audience”. Tsy mitovy amin’ny “audience” taty amin’ny “cours d’appel” intsony ny ao amin’ny “cours suprême” na fitsarana tampony. Rehefa nivoaka ny didy taty amin’ny CCO dia nomena 2 volana ireo rehetra tsy afa-po nametraka ny atao hoe “requête en cassation” na « mémoire en cassation » rehefa nahavita nametraka ilay fitakiana fitsipahana didy. Rehefa vita izay dia mbola tsy maintsy mametraka tatitra koa ny mpitsara ao amin’ny fitsarana tampony dia izay vao alefa tsaraina ny taratasin’ady. Tsy misy adihevitra lava be toy ny teo aloha intsony izany fa taratasy sisa no alefa ho tsaraina sy amoahan’ny fitsarana tampony didy. Mbola eto Madagasikara izy mivady ary tsy maintsy mbola miandry didy raikitra avy ao amin’ny fitsarana tampony satria tsy mitombona mihitsy ny andefasana an-dry zareo manefa ny saziny any ivelany na dia manana zom-pirenena frantsay aza ry zareo raha tsy hoe efa didy raikitra ilay izy, hoy hatrany ity mpisolovava ity.